IYunivesithi yaseFlorida I-Tour Photo
IYunivesithi yaseFlorida Century Tower
IYunivesithi yaseFlorida Century Tower. I-Credit Credit: Allen Grove
Uhambo lwethu lweYunivesithi yaseFlorida luqala ngolunye lwezakhiwo zee-iconus ze-campus - i-Century Tower yakhiwa ngo-1953 iminyaka eyi-100 eyunivesithi. Inqaba yazinikezelwa kubafundi banikela ubomi babo kwiiMfazwe zehlabathi ezimbini. Kwikota yesibini kamva, i-carellon yentsimbi engu-61 yayifakwe kwinqaba. Iibhendi ziphuma ngeentsuku zonke, kunye namalungu omfundi weCarillon Studio isitimela ukudlala isixhobo. Inqaba ibemi kufuphi ne-University Auditorium kunye ne-Auditorium Park - indawo epheleleyo eluhlaza yokubeka ingubo yokuphulaphula enye yeeConstron ngeCawa emva kweeCononon.
Amaphepha alandelayo abonisa ezinye iisayithi ezivela kwiYunivesithi yaseFlorida enkulu kunye nekhampasi. Uyakufumana iYunivesithi yaseFlorida ibhalwe kule nqaku:
IProfayili ye-Admissions yase-Florida
I-GPA, iSAT kunye ne-ACT Graph ye-UF
IiKholeji eziphambili zaseMzantsi-mpuma
Criser Hall kwiYunivesithi yaseFlorida
Criser Hall kwiYunivesithi yaseFlorida. I-Credit Credit: Allen Grove
I-Criser Hall inendima ebalulekileyo kubo bonke abafundi baseYunivesithi yaseFlorida. Isakhiwo sikhaya kwimiba yeenkonzo zabafundi. Ngomgangatho wokuqala, uya kufumana ii-ofisi zeMicimbi yezeMali yabaFundi, uMsebenzi wezeNgqesho, kunye neNkonzo zezeMali. Ngoko ukuba ufuna ukuxoxa ngoncedo lwakho lwezezimali, ufuna ukufumana umsebenzi wokufunda umsebenzi, okanye uceba ukuhlawula iibhili zakho kumntu, uya kuzifumana kwiCriser.
Wonke umntu osebenza kwiYunivesithi yaseFlorida unomdla kwizinto eziqhubekayo kumgangatho wesibini, ikhaya kwi-Ofisi ye-Admissions. Ngo-2011, iofisi ibanjwe ngaphezulu kwezi-27,000 izicelo zabafundi abatsha bonyaka wokuqala kunye namanye amawaka ngaphezulu kubafundi bokudlulisa kunye nabafundi abaphumelele. Ngaphantsi kwesiqingatha sabo bonke abafaki zicelo, bangena kwii-grade ezifanelekileyo kunye namanqaku ovavanyo olumgangatho.
UBryan Hall kwiYunivesithi yaseFlorida
UBryan Hall kwiYunivesithi yaseFlorida. I-Credit Credit: Allen Grove
Eyakhelwe ngo-1914, iBryan Hall yenye yezakhiwo zakuqala kwiYunivesithi yaseFlorida kwikampus kufuneka ibekwe kwiRejista kaZwelonke yeNgingqi. Isakhiwo sasekhaya sasekuqaleni seKholeji yoMthetho we-UF, kodwa namhlanje iyingxenye yeKarithton College of Business Administration.
Ibhishini enye yezona ndawo ziyaziwayo kakhulu kwiinkunivesithi yaseFlorida. Ngo-2011, abafundi abangaphezu kwe-1 000 bafumana i-bachelor degrees kwi-accounting, ulawulo lwezoshishino, i-finance, management science, okanye ukuthengisa. Inani elifanayo labafundi abaphumelele bafumana i-MBAs yabo.
Stuzin Hall kwiYunivesithi yaseFlorida
Stuzin Hall kwiYunivesithi yaseFlorida. I-Credit Credit: Allen Grove
I-Stuzin Hall, njengeBryan Hall, inxalenye yeYunivesithi yaseFlorida ye-Warrington College of Business Administration. Isakhiwo sineeklasi ezine ezinkulu zeeklasi zoshishino, kwaye likhaya kwiinkqubo zoshishino, amasebe kunye namaziko amaninzi.
IYunivesithi yaseFlorida iGriffin-Floyd Hall
IGriffin-Floyd Hall kwiYunivesithi yaseFlorida. I-Credit Credit: Allen Grove
Eyakhelwe ngo-1912, iGriffin-Floyd Hall yenye yezakhiwo zaseYunivesithi yaseFlorida kwiRejista kaZwelonke yeZindawo eziMandulo. Esi sakhiwo sasikhaya ikhaya kwiKholeji yezoLimo kwaye kwakubandakanya inkundla yokugweba imfuyo kunye negumbi loomatshini befama. Isakhiwo saqanjwa ngokuthi nguMil Wilbur L. Floyd, unjingalwazi kunye nomphathi oncedisayo kwiKholeji yezoLimo. Ngowe-1992 isakhiwo sahlaziywa ngesipho esivela kuBen Hill iGriffin, ngoko ke igama elikhoyo likaGriffin-Floyd Hall.
Isakhiwo sesitayela se-Gothic okwangoku singumzi kwiifilosofi kunye namasebe amanani. Ngo-2011, i-27 yaseYunivesithi yaseFlorida yabafundi bafumana i-bachelor degrees kwinani-mali, kwaye ama-55 athola idigrifi yeefilosofi. Iyunivesithi inamaphulo amancinci okugqwesa kwiimeko zombini.
IYunivesithi yaseFlorida Yomculo
IYunivesithi yaseFlorida Yomculo. I-Credit Credit: Allen Grove
Ngamalungu angaphezulu kwekhulu, ubugcisa obuhle buphila kunye neYunivesithi yaseFlorida. UMculo ungenye yeenkalo ezithandwa kakhulu kwiKholeji yoBugcisa boBugcisa, kwaye ngo-2011 abafundi abangama-38 bafumana amadigri e-bachelor kumculo, i-degrees master degrees, kunye no-7 abaqeqeshiweyo. Iyunivesithi inayo iprogram yokufunda isikolo esiphambili kunye neeprogram.
Ikhaya leSikole soMculo saseYunivesithi libizwa ngokuba yiSakhiwo soMculo. Isakhiwo esikhulu esinezitezi ezintathu sazinikezelwa ngumoya omkhulu ngowe-1971. Unamagumbi okufundela amaninzi, amagumbi okufundela, ama-studio kunye neendawo zokuhlaziya. Umgangatho wesibini ulawulwa yiThala leMculo kunye nokuqokelelwa kwayo kwegama elingaphezu kwama-35,000.
IYunivesithi yaseFlorida eTurlington Hall
IYunivesithi yaseFlorida eTurlington Hall. I-Credit Credit: Allen Grove
Isakhiwo esikhulu esikhulu, esisekuhlaleni sisebenza ngeendima ezininzi kwiYunivesithi yaseFlorida. Uninzi lweeofisi zolawulo kwiKholeji yezoBugcisa kwezobuGcisa neNzululwazi ziseTurlington, njengoko zininzi amagumbi okufundela, iiofisi zee-faculty, kunye nee-auditoriums. Isakhiwo sisekhaya kumasebe ase-Afrika-ama-American Studies, i-Anthropology, ii-Studies zase-Asia, isiNgesi, iJografi, i-Gerontology, iLwimi, kunye neNkcubeko (iNgesi kunye ne-Anthropology zibini ezidume kakhulu kwi-UF). Ikholeji yoBugcisa boBugcisa nezoSayensi yiyona nto inkulu kwiikholeji ezininzi ze-UF.
Inkundla phambi kweTurlington yindawo ephakamileyo phakathi kweeklasi, kwaye isakhiwo sihlala kufuphi ne-Century Tower kunye ne-University of Auditorium.
I-University Auditorium kwiYunivesithi yaseFlorida
I-University Auditorium kwiYunivesithi yaseFlorida. I-Credit Credit: Allen Grove
Eyakhelwe ngowe-1920, i-University Auditorium yenye yezona zakhiwo zaseYunivesithi yaseFlorida kwiRejista kaZwelonke yeNgingqi. Isakhiwo esibalulekileyo, njengoko igama libonisa, likhaya kwikhala. Iholo lihleli ngo-867 kwaye lisetyenziselwa uluhlu lweemakhonsathi, izifundo, iintetho, kunye neminye imisebenzi kunye nemikhosi. Ukuzalisa i-auditorium ngabahlobo bamagumbi omculo, isikhala esisetyenziselwa ukufumana. Iqumrhu le-auditorium, ngokwewebhusayithi yeyunivesithi, "yenye yezona zixhobo eziphambili zohlobo lwazo kwi-mpuma-mpuma."
IYunivesithi yaseFlorida yeNzululwazi yeNzululwazi kunye neSakhiwo seNzululwazi yeNkcukacha
IYunivesithi yaseFlorida yeNzululwazi yeNzululwazi kunye neSakhiwo seNzululwazi yeNkcukacha. I-Credit Credit: Allen Grove
Eyakhelwe ngo-1987, esi sakhiwo sakhiwa ekhaya kwiLayibrari yeSayensi yeLayibrari kunye neSebe leComputer kunye neScience Information and Engineering. Umgangatho womgangatho weZakhiwo zeNzululwazi ngekhompyutha unobumba omkhulu wekhompyutha ekusebenziseni abafundi.
IYunivesithi yaseFlorida inamandla amakhulu kunye nobunzulu obunzulu kwizayensi kunye nobunjineli, kwaye iLibrari yaseMarston isekela uphando kwizendalo zendalo, ezolimo, izibalo kunye nobunjineli. Zonke ziindawo ezidumileyo zokufunda kwizifundo zomgangatho wesibini kunye nezifundo.
IYunivesithi yaseFlorida yokwakha Ubunjineli
IYunivesithi yaseFlorida yokwakha Ubunjineli I-Credit Credit: Allen Grove
Isakhiwo esitsha esitsha sagqitywa ngo-1997 kwaye sisekhaya kumagumbi okufundela, iiofisi zeekhono kunye nama-laboratories kumasebe amanyathelo obunjineli. IYunivesithi yaseFlorida inamandla amakhulu kwiinjineli, kwaye unyaka ngamnye malunga nabafundi abayi-1 bafundele izifundo kunye nabafundi abayi-1 abaphumelele ekufundeni bafumana iinqununu zobunjineli. Okukhethwa kukho kubandakanya Ubunjineli boMbane kunye ne-Aerospace, Ubunjineli boMbane kunye neKhompyutha, iiNzululwazi zobunjineli bendalo, Ubunjineli boLuntu kunye noNxweme, Ubunjineli bezoLimo kunye neBiological, Ubunjineli bezoBomi, Ubunjineli beMichiza, i-Industrial Engineering kunye neNkqubo zobunjineli, kunye neNzululwazi yezoBunjineli noBunjineli
Izigulane kwiYunivesithi yaseFlorida
I-Alligator Sign kwiYunivesithi yaseFlorida. I-Credit Credit: Allen Grove
Awuyi kufumana uphawu njengale naliphi leyunivesithi ephakamileyo e-northeast. Ubungqina bokuba iYunivesithi yaseFlorida Gators ifumana igama labo iqela ngokunyanisekileyo.
Ukuthatha iifoto kwi-UF kwakumnandi kuba i-campus ineendawo ezininzi eziluhlaza. Uza kufumana indawo zokulondoloza ezikhethiweyo kunye neepaki zasezidolophini kulo lonke i-campus, kwaye akukho nto inqongophala yamachibi kunye nemigxobhozo kunye neLake Lake enkulu.
Uhambo olujikelezekileyo lweMithi kwiYunivesithi yaseFlorida
Uhambo olujikelezekileyo lweMithi kwiYunivesithi yaseFlorida. I-Credit Credit: Allen Grove
Ukuba uchitha ixesha elithile ujikeleza kwiYunivesithi yaseFlorida, uhlala ukhubeka kwiindawo ezintle ezifana nokuhamba ngokuhamba komthi kwinqanaba lembali le-campus. Ngasekhohlo yiGriffin-Floyd Hall, isakhiwo se-1912 kwiRejista kaZwelonke yeNgingqi. Ekunene yiPlaza yaseMelika, indawo enkulu eluhlaza edolophini ejikelezwe izakhiwo zemfundo kunye namathala eencwadi.
Yunivesithi yaseFlorida Gators
Bull Gator kwiYunivesithi yaseFlorida. I-Credit Credit: Allen Grove
I-Athletics yinto enkulu kwiYunivesithi yaseFlorida, kwaye isikolo sineempumelelo ezimangalisayo kwiminyaka yamuva kunye neenqwelomoya ezininzi zebhola zebhola kunye nebhola lebhola. Akukho mpazamo yosuku lomdlalo webhola lebhola kwi-campus xa iBen Hill Griffin Stadium igcwele abalandeli abangama-88,000 kwaye i-campus ihlala i-orange.
Ngaphandle kwebala lemidlalo yilo mfanekiso wesigatri. I-"Bull Gators" eqoshwe kwisiqingqiweyo ngabaxhasi abaye bathembisa isantya esiphezulu sonyaka kwiinkqubo zemidlalo yeyunivesithi.
I-Florida Gators incintisana kwiCandelo le-NCAA elinamandla I- Southeast-Conference Conference . Iiyunivesithi ezingama-21 amaqela e-varsity. Ukuba uthelekisa izikolo ze-SAT zeSibini , uya kubona ukuba kuphela iYunivesithi yaseVanderbilt eyenza iGators.
IHoim Weer kwiYunivesithi yaseFlorida
IHoim Weer kwiYunivesithi yaseFlorida. I-Credit Credit: Allen Grove
IYunivesithi yaseFlorida yindawo enkulu yokufunda i-journalism, kunye neHiimer Hall yikhaya kwiprogram. Isakhiwo sagqitywa ngo-1980, kwaye iphiko elitsha longezwa ngo-1990.
Isakhiwo se-square-square 125,000 sinezindlu zokupapashwa kweeNtengiso, iiNtlalontle zoLuntu, uLwazi loLwazi kunye noThungelwano. Ngo-2011, abangaphezulu kwama-600 abafundi be-UF bafumana i-bachelor degrees kule ndawo.
Isakhiwo sinezindlu ezininzi zee-radiyo nezethelevishini, ii-newsrooms, ilayibrari, i-auditorium, kunye neeklasi ezininzi kunye neelabhoratri.
UPugh Hall kwiYunivesithi yaseFlorida
UPugh Hall kwiYunivesithi yaseFlorida. I-Credit Credit: Allen Grove
UPugh Hall yenye yezakhiwo ezitsha kwiYunivesithi yaseFlorida. Kugqitywe ngo-2008, esi sakhiwo seenyawo ezingama-40,000 sinendawo yokuhlola enkulu kunye nendawo kawonkewonke yeziganeko ezininzi. Umgangatho wesithathu ungumzi kwiSebe leeLwimi, uLwazi lokuBhala kunye neNdawo, kwaye uya kufumana amaofisi e-faculty kuma-Asia naseAfrika. Ngo-2011, abafundi abangaphezulu kwe-200 bafumana i-bachelor degrees kwiindawo zolwimi.
U-Pugh Hall uhlala phakathi kweDauer ne-Newell Halls kwinqanaba lembali le-UF.
IYunivesithi yaseFlorida Library yaseNtshona
IYunivesithi yaseFlorida Library yaseNtshona. I-Credit Credit: Allen Grove
ILayibrari yeNtshona Koloni yenye yezona ziphambili zophando kunye neendawo zokufunda kwiYunivesithi yaseFlorida. Ngenye yeelayibrari ezisi-9 kwi-campus yaseGainesville. Ithala leNtshona-ntshona lihlala ekupheleni kwentla yePlaza yaseMerika kwindawo yesiganeko. I-Library ye-Smathers (okanye iThala leMathala eMpuma), ilayibrari enkulu kunazo zonke eyunivesithi, ihlala kwindawo efanayo ye-Plaza.
Ithala leNtshona-ntshona livame ukuvula ubusuku bonke kuloo mizuzu yokufunda ebusuku. Isakhiwo sineziphathamandla ezili-1,400, amaqela amanqaku amaninzi okufunda, ukufundela okuzithulekileyo, iikhomputha ezingama-150 zokusetyenziswa kwabafundi, kunye nezithathu kwiincwadi, ii-periodicals, microforms kunye nezinye iindaba.
Peabody Hall kwiYunivesithi yaseFlorida
Peabody Hall kwiYunivesithi yaseFlorida. I-Credit Credit: Allen Grove
Ukuba unayo nayiphi na imfuno ekhethekileyo, iYunivesithi yaseFlorida inokwenzeka ukuba uye wagubungela. I-Ofisi eyintloko yeeNkonzo zabafundi itholakala kwi-Peabody Hall, kwaye nayo iyindlu yeZiko loPhumo lwaBakhubazekile, iZiko lokuKhuthaza nokuPhepha, iZiko leNkqubela kunye neZimo eziPhezulu, i-APIAA (i-Asia Pacific Islander Affairs Affairs), i-LGBTA (Lesbian, Gay , Ubulili, i-Transgender Affairs), kunye nezinye iinkonzo.
Eyakhelwe ngo-1913 njengeKholeji yooTitshala, i-Peabody Hall ihleli kwicala elingasempumalanga ye-Plaza yaseMerika kwaye yenye yezakhiwo ezininzi ezikhangayo kwizithili zembali.
I-Murphree Hall eYunivesithi yaseFlorida
I-Murphree Hall eYunivesithi yaseFlorida. I-Credit Credit: Allen Grove
Uninzi lweeyunivesithi zikarhulumente zithatha abantu abaninzi. Noko ke, iYunivesithi yaseFlorida yintloko (kodwa ngokuqinisekileyo ayikho kuphela) iyunivesiti yokuhlala yokuhlala kwabafundi bezemfundo zezemfundo. Abafundi abangama-7 500 bahlala kwiiholo zokuhlala, kunye nabanye ababalelwa ku-2 000 bahlala kwiindawo zokuhlala kwiindawo zokuhlala. Abafundi abaninzi bahlala kumaqela aphilileyo ahlukeneyo njengama-sororities kunye namaqabane okanye kwiindawo zokuhlala ngaphakathi kunye nokuhamba ngebhayisikili kude ne-Gainesville campus.
I-Murphree Hall, enye yeendawo ezininzi zokuhlala kwiikholeji ezifumanekayo kubafundi bokuqala, zihlala emngceleni osenyakatho wekampus emthunzini kaBen Hill Griffin Stadium kunye nokufutshane kufuphi neThala leeNcwadi zeNtshona kunye nezakhiwo ezininzi zamagumbi okufundela. I-Murphree Hall inxalenye yeNgingqi yaseMurphree, eyinkimbinkimbi yeeholo zokuhlala ezintlanu - uMurphree, uSledd, uFletcher, uBuckman noTomas. Indawo yaseMurphree inexube lekamelo elilodwa, eliphindwe kabini, nelithathu (abafundi abaneminyaka yokuqala bangakwazi ukukhetha amakamelo athile). Ezi zintathu zeeholo zinomgangatho ophezulu omoya, kwaye ezinye ezimbini zivumela iiyunithi eziphathekayo.
I-Murphree Hall yakhiwa ngowe-1939 kwaye iRejista kaZwelonke yeNgingqi. Kwiminyaka emininzi isakhiwo siye safumana ukulungiswa kwamanani amaninzi. Uthiwa nguAlbert A. Murphee, umongameli wesibini weyunivesithi.
Indawo yokuhlala yaseHume East eYunivesithi yaseFlorida
Indawo yokuhlala yaseHume East eYunivesithi yaseFlorida. I-Credit Credit: Allen Grove
Ukugqitywa ngo-2002, iHume Hall yikhaya kwiKholeji ye-Honors Residential, indawo yokuhlala yokufunda eyenzelwe ukuxhasa abafundi, i-faculty kunye nabasebenzi beYunivesithi ye-Honors Programme. I-Hume East, eboniswe kwisithokiso apha, ngumfanekiso wesibuko we-Hume West. Edibeneyo, ezimbini izakhiwo zindlu 608 abafundi kwiindawo ezinama-double suites. Phakathi kwale mibini yakhiwo yesakhiwo kunye neendawo zokufunda, amagumbi okufundela kunye neeofisi zeNkqubo ye-Honours. I-80% yabemi baseHume ngabafundi bonyaka wokuqala.
I-Kappa Alpha Ubuhlobo kwiYunivesithi yaseFlorida
I-Kappa Alpha Ubuhlobo kwiYunivesithi yaseFlorida. I-Credit Credit: Allen Grove
Inkqubo yesiGrike idlala indima ebalulekileyo kwimpilo yabafundi kwiYunivesithi yaseFlorida. IYunivesithi inamalungu angama-26, ubuqhetseba obu-16, imibutho ye-Greek-black-history, kunye namaqela angama-13 e-Greek-based based letters. Zonke izinto ezikhohlakeleyo kunye nazo zonke izibini ezimbini zinezindlu zesahluko njengezindlu zeKappa Alpha eziboniswe ngasentla. Kuzo zonke, abafundi abangaba ngu-5 000 bangamalungu amaqela aseGrike e-UF. Imibutho yamaGrike ayilona wonke umntu, kodwa ingaba yindlela ephakamileyo yokwakha izakhono zobunkokeli, ukubandakanyeka ngeenkxaso kunye nezinye iiprojekthi zenkonzo, kwaye, ngokwenene, ziba yinxalenye yecandelo lezenhlalakahle ezinobomi kunye neqela elithile lamalungu athile.
Ukuze ufunde kabanzi ngeYunivesithi yaseFlorida, qiniseka ukutyelela iphrofayli ye-admissions ye-UF kunye nephepha lewebhu lewebhu elisemthethweni.
Indlela iNkampani ephakamisa ngayo iNkunzi
Yiyiphi i-Sociology Inokusifundisa Ngombulelo Wokubonga
Yintoni i Hydrogen?
Incwadi idibanisa - Isicwangciso seSifundo kubafundi abaneDyslexia
UFrancis Bacon ngoLutsha kunye nobudala
Inkcazo ye-Scapegoat, i-Scapegoating, ne-Scapegoat Theory
Iiplanga ezili-10 zahamba zibi